MINISTRY of FOREIGN AFFAIR – Page6– naypyitaw
The theme of Thailand’s Chairmanship and Thailand’s logo for the ASEAN Chairmanship in 2019
Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Tim Enderlin as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Switzerland to the Republic of the Union of Myanmar
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လာအိုနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
January 9, 2019(၉-၁-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လာအိုနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Lyying SAYAXANG က လာရောက်ဂါရဝပြု တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ခြင်းအား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်၊ ၁၅၀၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု မြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံပြည်သူများ အကျိုးစီးပွားအတွက် မြန်မာ-လာအို ချစ်ကြည်ရေးတံတားအား ပိုမိုထိရောက်စွာ အသုံးပြုရေးကိစ္စ၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား အလုပ်သမားကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ Foreign and Commonwealth Office မှ Permanent Under-Secretary အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
January 9, 2019(၉-၁-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ Foreign and Commonwealth Office မှ Permanent Under-Secretary ဖြစ်သူ H.E. Sir Simon McDonald အား ၈-၁-၂၀၁၉ ရက်၊ နံနက် ၁၀၀၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် နေပြည်တော်သို့ သံရုံးပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရေး အခြေအနေနှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး၊ မြန်မာ-ဗြိတိန် နှစ်နိုင်ငံအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အကူအညီပေးရေး ကိစ္စများနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စ အပါအဝင် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သက်ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် အရာရှိများ တက်ရောက် ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။...
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပီရူးသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
January 7, 2019(၇-၁-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်) နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ပီရူးသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Fernando Quiros Campos အား ယနေ့ ၁၁၃၀ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ တွေ့ဆုံစဉ်အတွင်း မြန်မာ-ပီရူး နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး တိုးတက်ခိုင်မာရေး၊ ပြည်သူအချင်းချင်း ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်သွားရန်နှင့် အားကစား၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှု တားဆီးရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍများ အပါအဝင် ကဏ္ဍပေါင်းစုံတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြ ကြောင်း သိရှိရပါသည်။...
January 14, 2019(၁၄-၁-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်) ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ (၇၁) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်၊ ၁၉၀၀ နာရီမှ ၂၁၀၀ နာရီအထိ ဗန်ကောက်မြို့၊ The Athenee Hotel တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်သန်းမှ ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်သီချင်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များ ကျန်းမာစေရန် ဆုမွန်ချွေခြင်းနှင့် အပြန်အလှန် ဆုတောင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဟိုတယ် အစားအသောက်များအပြင် မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအသောက်များဖြစ်သော ထောပတ်ထမင်း၊ ကြက်သား၊ ဘာလချောင်ကြော်၊ ဆနွင်းမကင်း၊ ကျောက်ကျောတို့ဖြင့် ကြွရောက်လာသော ဧည့်သည်များအား တည်ခင်းဧည့်ခံခြင်း၊ မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုအကများဖြင့် ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်ကပြမှု များ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် (၁၄) ခု၏ အထင်ကရနေရာများအား ပြသထားသည့် ရှုခင်းအလှဓာတ်ပုံ (၂၈) ချပ်အား ခင်းကျင်းပြသခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပေးပို့သည့် တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် (၁၄) ခု၏ လက်ကမ်း စာစောင်များ ဖြန့်ဝေခြင်းတို့ကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားသို့ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီး H.E. Police General Adul Sangsingkeo၊ နိုင်ငံခြားရေး ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Virasakdi Futrakul နှင့်ဇနီး၊ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် ဒုတိယ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Gen Bundit Boonyapan တို့ အပါအဝင် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အရာရှိကြီးများ၊ ဗန်ကောက်မြို့ အခြေစိုက် သံရုံး၊ အဖွဲ့ရုံးများမှ သံရုံးအကြီးအကဲများနှင့် သံတမန်များ၊ ကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများမှ အကြီးအကဲများ၊ စစ်သံမှူးများ၊ ထိုင်းအစိုးရ စစ်ဘက်/ နယ်ဘက်မှ အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနှင့် ထိုင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ မြန်မာမိတ်ဆွေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပညာတော်သင် ကျောင်းသား/သူများ နှင့် ဖိတ်ကြားထားသူများ စုစုပေါင်းဧည့်ပရိသတ် (၄၀၀) ကျော် စုံညီစွာ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။...
January 8, 2019(၈-၁-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်) မြန်မာသံရုံး၊ စင်ကာပူမြို့မှ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ (၇၁) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်၊ ညနေ ၁၈၃၀ နာရီမှ ၂၀၃၀ နာရီ အထိ စင်ကာပူမြို့ရှိ Shangri-La ဟိုတယ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ အခမ်းအနားသို့ Chief Guest အဖြစ် စင်ကာပူနိုင်ငံ Minister for Manpower and Second Minister for Home Affairs ဖြစ်သူ Mrs. Josephine Teo ဦးဆောင်သော စင်ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စင်ကာပူစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ၊ မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာအသိုက်အဝန်းများနှင့် တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များ ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည် (၂၅၀) ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် စင်ကာပူနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဌေးအောင်မှ လွတ်လပ်ရေးနေ့မိန့်ခွန်းကို လည်းကောင်း၊ ဧည့်သည်ဝန်ကြီး Mrs. Josephine Teo မှ Return Speech ကိုလည်းကောင်း ပြောကြားခြင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်သီချင်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ ကျန်းမာစေရန် ဆုမွန်ချွေခြင်းနှင့် အပြန်အလှန်ဆုတောင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဟိုတယ်အစားအသောက် များအပြင် မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအသောက်များဖြစ်သော မုန့်ဟင်းခါး၊ ကြာဇံချက်၊ ခေါက်ဆွဲကြော်၊ ဆနွင်းမကင်း၊ ကျောက်ကျောတို့ဖြင့် ကြွရောက်လာသော ဧည့်သည်များအား တည်ခင်းဧည့်ခံခြင်း၊ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုအကများအား စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ ကုမုဒြာ မြန်မာကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများက တင်ဆက်ကပြ ဖျော်ဖြေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။...
December 14, 2018U Kyaw Moe Tun, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Swiss Confederation, presented his Credentials to His Excellency Mr. Alain Berset, President of the Swiss Confederation, on 11 December 2018 in Bern. Ministry of Foreign Affairs Nay Pyi Taw Dated. 14 December 2018 သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဖယ်ဒရယ်ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူထံ ခန့်အပ်လွှာပေးအပ် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းသည် ၎င်း၏ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ဘန်းမြို့၌ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဖယ်ဒရယ်ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ သမ္မတ မစ္စတာ အလိန်းဘာဆတ်ထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန နေ ပြည် တော် ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်...